Lamaody ny mamoaka sary maro
2008-02-22 @ 17:50 in Politika
Raha mbola lamaody aty amin'ny tontolom-bolongana ny mitagataga dia ny mamoaka sary maro kosa, na manokana pejy manokana sary ranofotsiny no lamaodin'ny gazety amin'izao fotoana izao. Na izany fihetsiketsehana ara-java-kanto, na toy ireny tondra-drano na rivodoza ireny dia misy hatrany ny pejy manokana amin'ny sary. Misy aza mba mahita zavatra hafahafa dia avoaka ihany koa. Toa tahaka ny latsa-danja mihitsy ny gazety rehefa tsy maro sary. Ny mahasamihafa azy fotsiny dia misy ny sary mainty sy fotsy ary misy ny miloko.
Vaovao hafa manaraka dia namoaka gazety amin'ny teny malagasy ihany koa ny Madagascar tribune. Inona ny vaovao no anarany. Ariary zato, miarahaba azy aho na dia hitako tampoka fotsiny aza satria dia teny Soarano no nahitako raha niandry azy aho tany an-tanàna. Angamba mbola vitsy ny natonta.